Bangladesh: Ady Amin’ny Fiverimberenan’ny Fahantrana · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh: Ady Amin'ny Fiverimberenan'ny Fahantrana
Voadika ny 18 Marsa 2018 3:04 GMT
Hasongadinay amin'ny famoriana amin'ity herinandro ity ny sasany amin'ireo adihevitra mitranga ao amin'ny tontolon'ny bilaogy banglà momba ny resaka Fahantrana, ny LGBT ary ny Fandehandehanana.
Firenena andalam-pandrosoana i Bangladesh ary ny habetsahan'ny mponina no olana goavan'ity firenena ity. Iray amin'ireo firenena manana hakitroky ny mponina ambony be izy. Na dia fahagagàna aza ny fihenan'ny fitomboan'ny mponina ho 1,7 isanjato (3% tamin'ny taona 70), dia mampidina ny tahan'ny vola miditra isam-batan'olona ka mampahantra ny firenena ny fisian'ireo mponina maro be any ambanivohitra miaraka amin'ny fiangaly tsotra ny fiainan-dry zareo. Raha tsy misy ny loza voajanahary mamely ny firenena ao anatin'ny taona iray dia mety mahavita tena ara-tsakafo ho an'ny mponina 140 tapitrisa ( eo ho eo amin'ny 90%) izy. ‘Ndeha ho jerentsika ny tontolon'ny bilaogy mba hahitàna ny ady ataon'ny firenena hivoahana amin'ny fiverimberenan'ny fahantrana.
Nizara tatitra mombana lahatsary fanadihadiana miresaka tanora mahantra miasa mafy any ambanivohitr'i Bangladesh i Shawn Ahmed avy ao amin'ny The Uncultured Project. Hoy izy :
Raha mety ho foana amin'ny alàlan'ny asa mafy sy ny fahavononan'ny mahantra fotsiny ny fahantrana dia efa ela no foana ny fahantrana any amin'ny tany mahantra. Ireo mahantra any amin'ny tany andalam-pandrosoana no isan'ireo olona miasa mafy indrindra eto amin'ny planeta… Hasongadiko indray ny zavatra fantatro taloha efa elabe: tsy kamo ny mahantra.
Inty ny lahatsary novokarin'i Shawn (nampiasàna fahazoandàlana creative commons) :
Ny fisian'ny indostriany mpanamboatra fitafiana izay niroborobo tamin'ny faramparan'ny taona valopolo no niadian'i Bangladesh hampihenana ny fahantrana. Ireo sokajim-behivavy mikarama tsizarizary izay tsy manan-tsafidy afa-tsy ny miasa ho toy ny mpahandro sakafo, mpiasa an-trano ary mandray vola kely, dia miasa any amin'ny orinasa mpanamboaatra fitafiana an'arivony sy ireo orinasa hafa ankehitriny. Ary ny fampiroboroboana ny fampindramam-bola madinika nataon'ilay nahazo ny loka Nobel, Dr Muhammad Yunus dia mikendry ny hanampiana ireo vehivavy hivoaka amin'ny fahantrana. Nisy fiantraikany lehibe tamin'ny fanomezana hery ireo vehivavy tao anatin'ny fiarahamonina anjakan'ny silamo izany.
Dr. Kathryn Ward-n'ny Bideshi Blue dia mpiara-mamorona ny tetikasa Nari Jibon, mpanolotra karazana fahaizamanao ho an'ny vehivavy, izay nanao asa mendrika tamin'ny alàlan'ny fampianarana amin'ny fiteny Bangla , manjaitra, teny Anglisy ary informatika amin'ny sarany mora. Mampahafantatra i Kathy :
Maro amin'ireo mpianatray no manohy mampiroborobo ny fandraharahàny, manatsara ny karamany amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra teny Bangla sy ny fahaiza-manao, asa any amin'ny birao sy ONG, ary manohy ny fianarany ambony momba ny informatika sy manatsara ny fahaizany Anglisy sy Bangla, amin'ny fitenenana, fanoratana ary famakiana.
Na maro aza ny fikambanana miasa tahaka izany any Bangladesh, dia nahavita zavatra bebe kokoa ny Nari Jibon. Noho ny fanomezana avy amin'ny Rising Voices, dia nentiny hitodika amin'ny bilaogy izay mitantara amin'izao tontolo izao ny fiainany, ny tolona nataony ary ny fifaliany ireo vehivavy mpiasa madinika. Henoy i Kathy miresadresaka ny tombontsoa amin'ny fitorahana bilaogy ho an'ireo vehivavy banglà ao amin'ny tafatafa ao amin'ny onjam-peo.
Nasehon'ny bilaogy Drishtipat anay ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny gazetiboky Himal South Asian izay manome tara-pahazavana ho any amin'ny vondrom-piarahamonina pelaka any Bangladesh. Satria mbola fady ny fiarahan'ny olona mitovy taovam-pananahana ao amin'ny fiarahamonina, dia mampiasa aterineto ny olona mba hamoronana vondrom-piarahamonina virtoaly sy toeram-pihaonan'ny lehilahy fantatra fa pelaka any Bangladesh.
Tamin'ny faran'ny taona 2002 no natombok'ireo lehilahy nahita fianarana ny vondrona pelaka voalohany amin'ny aterineto ho an'ny banglà – vondrona antsoina hoe BOB ao amin'ny Yahoo, natao ho an'ny tovolahy banglà irery ihany. Sasatry ny mikaroka pelaka any amin'ny toerana natao ho an'ny daholobe toy ny toerana fihaonana Ramna Park ry zareo dia nanantena ny hamorona rohim-pinamànana amin'ny aterineto mba hahafahana manomboka miresaka am-pilaminana ny momba ny fironana ara-pananahana. Satria BOB no fikambanana pelaka lehibe indrindra fantatra any Bengladesh dia izy no heverina ho fandrefitsindrin'ny (baromètre) vondrom-piarahamonina pelaka ao amin'ny firenena. Araka izany dia ny BOB no manampy amin'ny faminavinàna ny faniriana ara-politikan'io vondrona io – ary, vao haingana , no nanome hirika ny amin'ny fomba fiantraikan'ny fitsipika noho ny hamehana teo amin'ny vondrom-piarahamonina pelaka any Bangladesh tamin'ny taona lasa.
Manome vaovao ny Joybangla.info, bilaogy momba ny fandehandehanana any Bangladesh :
Taorian'ny fahadisoam-potoana maro, fahatapahana, tsy fifanarahana ary sakana iray, dia hiverina hiasa indray ny fiaran-dalamby mampitohy an'i Kolkata sy Dhaka amin'ny 14 Aprily.
Noraisin'i Bodda avy ao amin'ny bilaogy Scattered Words ny safidin'ny taona vaovao ka nitsidika ireo toerana maromaro any Bangladesh izy ary nitoraka bilaogy ny momba izany. I Kushtia , ilay toerana malaza noho ny fananany ny ‘chalan bil’ malaza, faritra mando lehibe ao amin'ny firenena, sy i Lalon, ilay hira mifono zava-miafina any Bengal ary i Rabindranath Tagore, ilay bengali nahazo ny Loka Nobel no notsidihan'ilay mpitoraka bilaogy. Manana bebe kokoa momba an'i Lalon Fakir i Raza Rumi.
Taorian'ny fitsidihan'i Ahmed Sharif ny ala tropikalin'i Lawachara&Sreemangal dia nanoratra tatitra an-tsary tao amin'ny Bilaogy an-tsariny “Desher Chobi” izy.